Waitress Archives - Glory Assumption Space
စားပွဲထိုး - မ - ( ၁၀ ) ယောက်
Location in : Chan Aye Thar Zan
Salary Rang : 80000
###### URGENT REQUIREMENT ###### မင်္ဂလာပါရှင့်။ GAS နှင့်ချိတ်ဆက်ထားသော ဘားနှင့်စားသောက်ဆိုင် တွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန် အောက်ပါဝန်ထမ်း အမြန်အလိုရှိသည်။(တစ်ပတ်အတွင်း အင်တာဗျူး ရှိသည် ) မန္တလေးမြို့။ ၁. စားပွဲထိုး - မ - ( ၁၀ ) ယောက် / လစာ - ၈၀,၀၀၀ ကျပ် / ချမ်းအေးသာစံမြို့နယ်၊မန္တလေးမြို့ ။
- အထက်တန်းအောင်မြင်ထားသူ ဖြစ်ရမည်။ - အစမ်းခန့်် ကာလ (၂) လ ပြည့်ပြီးနောက် လစာ - ၁၅၀၀၀၀ ကျပ် ပေးမည်။ - သက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ ရှိသူဦးစားပေးမည်။ - နေစရာ အဆောင် စီစဉ်ပေးမည်။ - အသက် (၂၀) နှစ် (၃၀) နှစ်ကြားရှိသူဖြစ်ရမည်။ - ဂျူတီ အလှည့်ကျ ဆင်းနိုင်ရမည်။ - ယူနီဖောင်း အပြည့်အစုံပေးမည်။ - လုပ်ငန်းနှင့်ပတ်သတ်သည့် သင်တန်းများကို စိတ်ပါဝင်စားစွာ သင်ယူလေ့လာ နိုင်သူဖြစ်ရမည်။ မှတ်ချက် ။ ။ CV Form များတွင် Passport ဓာတ်ပုံ တစ်ပါတည်းထည့်သွင်းပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်။ Email ဖြင့်လည်းကောင်း၊ လူကိုယ်တိုင်လည်းကောင်း လာရောက်လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ Viber ဖြင့် CV ပို့မည်ဆိုပါက ဓာတ်ပုံသေချာ ကြည်လင်ပြတ်သားစွာ ရိုက်၍ ပေးပို့ပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည် ။ E-mail- mdygasrecruit.hr2@gmail.com , mdygasrecruit.hr3@gmail.com Phone Number - 09750108882 , 09750108883 , 09750108884 Viber Phone Number – 09750108882 , 09750108883 ရုံးခန်းလိပ်စာ – ခြံအမှတ် D4 ၊ သီရိရိပ်သာ ( ၂ ) ၊ ၆၅ လမ်း ၊ ၃၃ လမ်း x ၃၄ လမ်းကြား ၊ ချမ်းအေးသာဇံမြို့နယ် ၊ မန္တလေးမြို့ ။
မင်္ဂလာပါရှင့်။GAS နှင့်ချိတ်ဆက်ထားသော Restaurant တွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန် အောက်ပါဝန်ထမ်း အမြန်အလို ရှိသည်။ 1. Waitress – Female (5)Posts / လစာ – ၉၀၀,၀၀၀ ကျပ်+(အပိုဆုကြေးငွေ) / မရမ်းကုန်းမြို့ နယ်။ •	ဆယ်တန်း ( သို့မဟုတ် ) ဆယ်တန်းအောင်ရမည်။ •	နေစားစရိတ်ငြိမ်းစီစဉ်ပေးမည်။ •	အသက် ၂၅ ဝန်းကျင်။ မှတ်ချက် ။ ။ CV Form များတွင် Passport ဓာတ်ပုံ တစ်ပါတည်းထည့်သွင်းပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်။ Email ဖြင့်လည်းကောင်း၊ လူကိုယ်တိုင်လည်းကောင်း လာရောက်လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ Viber ဖြင့် CV ပို့မည်ဆိုပါက ဓာတ်ပုံသေချာ ကြည်လင်ပြတ်သားစွာရိုက်၍ ပေးပို့ပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည် ။ E-mail- gasrecruit.hr5@gmail.com, gasrecruit.cv@gmail.com, gasrecruit.hr7@gmail.com Phone No.- 09-262555437 , 09 262223785, 09 262223784 Viber Phone Number – 09263121101, 09262223784 , 09262223785 , 09262223783 ရုံးခန်းလိပ်စာ – Myanmar Professional Training Center @ MPTC ခိုင်ရွှေဝါလမ်း ၊ အမှတ် (၂၉) ပထမထပ် လှည်းတန်း ကမာရွတ်မြို့နယ်။ ( လှည်းတန်း မှတ်တိုင်တွင် ဆင်းရန် ။ အင်းစိန်လမ်းမကြီး )
Waitress - Female (5) Posts
မင်္ဂလာပါရှင့်။GAS နှင့်ချိတ်ဆက်ထားသော ပုဂံမြို့ရှိ Restaurant တွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန် အောက်ပါဝန်ထမ်း အမြန်အလို ရှိသည်။ အင်တာဗျူးချက်ချင်းဝင်ရမည်။ Waitress – Female (5)Posts / လစာ – ၁၀၀,၀၀၀ ကျပ်+(အပိုဆုကြေးငွေ) / ပုဂံမြို့ •ဆယ်တန်း ( သို့မဟုတ် ) ဆယ်တန်းအောင်ရမည်။ • နေစားစရိတ်ငြိမ်းစီစဉ်ပေးမည်။ •လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံရှိသူ ဦးစားပေးမည်။ •ရေရှည်လုပ်ကိုင်နိုင်သူဖြစ်ရမည်။ မှတ်ချက် ။ ။ CV Form များတွင် Passport ဓာတ်ပုံ တစ်ပါတည်းထည့်သွင်းပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်။ Email ဖြင့်လည်းကောင်း၊ လူကိုယ်တိုင်လည်းကောင်း လာရောက်လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ Viber ဖြင့် CV ပို့မည်ဆိုပါက ဓာတ်ပုံသေချာ ကြည်လင်ပြတ်သားစွာရိုက်၍ ပေးပို့ပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည် ။ E-mail- gasrecruit.hr5@gmail.com, gasrecruit.cv@gmail.com, gasrecruit.hr7@gmail.com Phone No.- 09-263121101 , 09 262223785, 09 262223784 Viber Phone Number – 09263121101, 09262223784 , 09262223785 , 09262223783 ရုံးခန်းလိပ်စာ – Myanmar Professional Training Center @ MPTC ခိုင်ရွှေဝါလမ်း ၊ အမှတ် (၂၉) ပထမထပ် လှည်းတန်း ကမာရွတ်မြို့နယ်။ ( လှည်းတန်း မှတ်တိုင်တွင် ဆင်းရန် ။ အင်းစိန်လမ်းမကြီး )
Waitress- Famale - (5) Posts/လစာ- ၁၅၀,၀၀၀ ကျပ်(အထက်)
1. Waitress– Female -5Posts / လစာ -၁၅၀,၀၀၀ကျပ် (အထက်) / မရမ်းကုန်းမြို့နယ် • မရမ်းကုန်းမြို့နယ်၆ မိုင်ခွဲတွင်ရှိသော Restaurantတွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်နိုင်ရမည်။ • နာမည်ကြီးစားသောက်ဆိုင်များတွင် လုပ်ကိုင်ဖူးသူဖြစ်ရမည်။ • လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံရှိသူ ဖြစ် ရမည်။ • အသက် ၂၀ နှစ်အထက် ရှိသူဖြစ်ရမည်။
Waitress- Female (5) Posts
1.Waitress - Female (5) posts / Salary – 80,000 Above Kyat / Kyauk Tadar Township . - နေစရာ ၊ စားစရိတ် စီစဉ်ပေးပါသည် ။ - လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံမရှိသူများလဲ လျှောက်ထားနိုင်ပါသည် ။ - ရုပ်ရည်အသင့်အတင့်ရှိပြီး စကားပြောပြေပြစ်ရပါမည် ။ - ပညာအချင်းအချင်း အလယ်တန်းအဆင့်ရှိရပါမည်။ မှတ်ချက် ။ ။ CV Form များတွင် Passport ဓာတ်ပုံ တစ်ပါတည်းထည့်သွင်းပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်။ Email ဖြင့်လည်းကောင်း၊ လူကိုယ်တိုင်လည်းကောင်း လာရောက်လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ E-mail- gasrecruit.cv@gmail.com, gasrecruit.hr1@gmail.com, gasrecruit.hr7@gmail.com, gasrecruit.cv@gmail.com Phone No - 09-262223785 , 09 977397705, 09 263121101, 09262223784 ရုံးခန်းလိပ်စာ – Myanmar Professional Training Center @ MPTC ခိုင်ရွှေဝါလမ်း ၊ အမှတ် (၂၉) ပထမထပ် လှည်းတန်း ကမာရွတ်မြို့နယ်။ ( လှည်းတန်း မှတ်တိုင်တွင် ဆင်းရန် ။ )
Waitress - Female (5) posts / Salary - 80,000 Kyat .
****************** Urgent Requirement ****************** မင်္ဂလာပါGASနှင့်ချိတ်ဆက်ထားသောကျောက်တံတားမြို့နယ်ရှိသော ကုမ္ပဏီများတွင် အောက်ပါဝန်ထမ်းများလိုအပ်နေပါသည်။ 1. Waitress - Female (5) posts / Salary – 80,000 Above Kyat / Kyauk Tadar Township . - နေစရာ ၊ စားစရိတ် စီစဉ်ပေးပါသည် ။ - လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံမရှိသူများလဲ လျှောက်ထားနိုင်ပါသည် ။ - ရုပ်ရည်အသင့်အတင့်ရှိပြီး စကားပြောပြေပြစ်ရပါမည် ။ - ပညာအချင်းအချင်း အလယ်တန်းအဆင့်ရှိရပါမည်။ မှတ်ချက် ။ ။ CV Form များတွင် Passport ဓာတ်ပုံ တစ်ပါတည်းထည့်သွင်းပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်။ Email ဖြင့်လည်းကောင်း၊ လူကိုယ်တိုင်လည်းကောင်း လာရောက်လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ E-mail- gasrecruit.cv@gmail.com, gasrecruit.hr1@gmail.com, gasrecruit.hr7@gmail.com, gasrecruit.cv@gmail.com Phone No - 09-262223785 , 09 977397705, 09 263121101, 09262223784 ရုံးခန်းလိပ်စာ – Myanmar Professional Training Center @ MPTC ခိုင်ရွှေဝါလမ်း ၊ အမှတ် (၂၉) ပထမထပ် လှည်းတန်း ကမာရွတ်မြို့နယ်။ ( လှည်းတန်း မှတ်တိုင်တွင် ဆင်းရန် ။ )
Waiter/Waitress - (5 ) Posts
ကျောင်းကိစ္စကင်းရှင်းသူဖြစ်ရမည်။ အလုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ (၁) အထက်ရှိရမည်။ Hotel သင်တန်ဆင်းလက်မှတ် ရှိသူဦးစားပေးမည်။ မှတ်ချက် ။ ။ CV Form များတွင် Passport ဓာတ်ပုံများပါ တစ်ပါတည်းထည့်သွင်းပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်
Waitress - Female (10)Posts
- ဘွဲ့ရ ဖြစ်ရမည်။ - အတွေ့အကြုံရှိသူ ရှိရမည်။ - English စကားပြောနိူင်သူဖြစ်ရမည်။ - စားစရိတ်နှင့်နေထိုင်ရန် အားလုံး စီစဉ်ပေးမည်။